Xiaomi ga-ebupụta smartwatch ya na oriri yiri nke Garmin | Gam akporosis
Xiaomi choro ka smartwatch ya rute n'ike oriri nke Garmin wearables
Xiaomi na gị Band 2 nwere ngwaahịa nke na-agba ume ịzụta gị nakwa na mbipụta ya nke mbụ rere ọtụtụ nde nkeji gburugburu ụwa. Na ahịa nke ọla aka ọrụ, o jisiri ike kụọ akara ahụ ka ọ bụrụ otu n'ime ọkacha mmasị maka ọtụtụ ndị ọrụ. Ugbu a, anyị ga-ama ma ọ ga - enwe ike ị nweta otu ihe ahụ ma ọ bụ igwe elele anya.
Na ahịa smartwatch enwere mkpa ịnwe akwa nke anyị na-agaghị ana ụgwọ kwa ụbọchị, ihe dị mkpa maka ngwaahịa nke ụdị a iji nwee ọganiihu n'ahịa ma yabụ anyị ka na-ahụ ibe anyị ka anyị chọta nke na-akpọ anyị n'ezie lee anya na inweta ya. Mgbe o yiri ka Xiaomi dị njikere iweta smartwatch n'ahịa, Pan Jiutang, onye nyocha China ekpugherela na Weibo na ebumnuche onye nrụpụta bụ inwe ike oriri yiri Garmin wearables.
Ọ ga-interesing hụ Xiaomi ka ya na Garmin sọ mpi nke nwere 3,5 pasent ahịa na-ekere òkè na nkeji nke anọ nke 2015. companylọ ọrụ ahụ nọgidere na-abụ nke ise na ahịa a na-eji ejiji ejiji ebe a pụrụ ịchọta smartwatches na wristbands ọrụ. Jiutang n'onwe ya kwuru na ntinye ọnụahịa maka smartwatch Xiaomi kwesịrị ịdị gburugburu $ 152 na $ 243. Nke a pụtara na anyị nwere ike ịhụ ụdị dị iche iche nke otu smarwatch.
Okwu ikpeazụ sitere na Xiaomi banyere nke a ga-eyi ngwa ngwa sitere n'aka osote onye isi ala, onye n'April kwuru na ụlọ ọrụ ahụ ga-ebupụta smartwatch ya. site na etiti afo a. Dika ego agbakwunyere, onye isi oche nke Huami gosiputara atụmatụ nke Xiaomi na smartwath. Yabụ ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ịhụ ihe Xiaomi nwere ike ịnye ya na smartwatch ya iji pụọ na asọmpi ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » smartwatch » Xiaomi choro ka smartwatch ya rute n'ike oriri nke Garmin wearables
Etu esi echekwa batrị na gam akporo M site na ịmanye ọnọdụ Doze. Chekwaa batrị 40% !!
Nkesa a na - enweta n’ụwa nile na - eto naanị 7% na 2016